Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa Marijuana any Virginia
Ahoana ny fomba hahazoana a Marijuana Fahazoan-dàlana amin'ny orinasa ao amin'ny Virginia
Ny fahalalana ny fahazoana fahazoan-dàlana marijuana dia ny dingana voalohany hitsofohana amin'ny indostrian'ny rongony any Virginia.
Tamin'ny fiandohan'ny volana aprily 2021, nifidy i Virginia mba hanara-dalàna ny fampiasana marijuana ho an'ny olon-dehibe. Araka ny lalàna vaovao, ny fambolena trano sy ny fananana manokana dia ho ara-dalàna hatramin'ny Jolay 2021, fa ny varotra antsinjarany dia tsy hanomboka raha tsy amin'ny 2024.
Komity misy olona 5 no natolotra hanara-maso ny tsenan'olon-dehibe any Virginia, hamaritana ny fahazoana fahazoan-dàlana. Ity komity ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana, fampiatoana, fanafoanana ny fahazoan-dàlana ary famoahana onitra.
Inona avy ireo karazana fahazoan-dàlana marijuana misy any Virginia?
Araka ny HB 2312, misy karazana lisansa rongony 5 isan-karazany ampiasaina any Virginia:
Fahazoan-dàlana momba ny fambolena marijuana
Fahazoan-dàlana hanamboatra marijuana
Fahazoan-dàlana hanadinana marijuana
Fahazoan-dàlan'ny mpamongady marijuana
Fahazoan-dàlana amin'ny fivarotana marijuana antsinjarany
Fandoavana lisansa ho an'ny orinasa marijuana any Virginia
Ny Virginia Cannabis Control Authority dia miandraikitra ny fametrahana ny saram-pitsarana. Ny sarany fahazoan-dàlana ho an'ny fahazoan-dàlana rongony ampiasain'ny olon-dehibe dia mbola tsy navotsotra, noho izany dia mila mailo ianao amin'ny vaovao momba an'io. Tsy misy fomba hahafantarana marina hoe ohatrinona ny saram-pisoratana anarana, satria ny fanjakana sasany dia mitentina roa hetsy dolara, fa ny fanjakana hafa kosa dia mitaky vola an'aliny.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy ao an-tsainao fa ireto no vidiny ihany ny sarany ofisialy mba hampiharana sy hitazonana fahazoan-dàlana any amin'ny fanjakana. Raha te-hanomana ara-bola ny ekipanao dia tsy maintsy jerenao ny trano sy ny vola lany amin'ny asa aman-draharaha / isan'andro mba hamaritana hoe ohatrinona ny vola ilainao handanianao ny fandidiana.
Raha fintinina dia mety te-handanjalanja vola aman'arivony dolara ianao, handrakofana ny asa rehetra.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS MARIJUANA any MICHIGAN
FIVAVAHANA MISY: LICENSE CANNABIS EQUITY SOSIALY VIRGINIA
Mila fitarihana ve ianao?
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Virginia?
Raha te hijery ireo fepetra manokana napetrak'i Bill S854 ianao dia azonao atao ny mijery ny “Lisansa fananganana marijuana any Virginia”Lahatsoratra. Misy ihany koa ny fepetra manokana takian'ny mpangataka arakaraka ny karazana fahazoan-dàlana tadiavina.
Amin'ny ankapobeny, ny Virginia Cannabis Control Authority dia tsy maintsy mamorona fitsipika mamaritra raha tokony homena fahazoan-dàlana ny mpangataka iray, mifototra amin'ireo fitsipika ireo amin'ny fenitra manokana, indrindra momba ny mombamomba ny mpangataka sy ny fahaizany mitondra ny asa.
Amin'io lafiny io dia takiana ny mpangataka handefa:
Fampiharana amin'ny endrika natolotry ny birao
Porofon'ny fanaraha-maso ny nananganana azy ireo
Fandoavana ny sarany fangatahana
Ankoatr'izay, misy ny fepetra hafa toy ny fandefasana fanamarihana fangatahana eo am-baravaran'ny fananganana sy ny fanaraha-maso.
Mba hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa rongony any New York dia tokony hanomana ihany koa ianao a drafitra fandraharahana rongony. Ity drafitra fandraharahana ity dia tokony hampiditra ireto zavatra manaraka ireto:
Fitantanana sy fiasa
Marketing sy varotra
Fepetra ilaina amin'ny Virginia-manokana
Mba hahitana ny fomba fiasa amin'ny ho avy dia zava-dehibe ny drafi-pandraharahana rongony, satria izy io no làlan'ny orinasanao rongony.
Fisoratana lisansa marijuana any Virginia
Araka ny HB2312, ireo fahazoan-dàlana dia tsy afaka mihoatra ireto isa manaraka ireto:
Fahazoan-dàlana momba ny fambolena marijuana: Lisansa 450
Fahazoan-dàlana hanamboatra marijuana: Lisansa 60
Fahazoan-dàlana hanadinana marijuana: Tsy misy cap napetraka
Fahazoan-dàlan'ny mpamongady marijuana: Lisansa 25
Fahazoan-dàlana amin'ny fivarotana marijuana antsinjarany: Lisansa 400
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hanananao fanajana hatrany ny indostrian'ny rongony any Virginia dia aza misalasala Mifandraisa aminay.
Raha te-hohavaozina ianao amin'ny fanjakan'ny Cannabis ara-dalàna ankehitriny, dia tokony hijery ny anay sarintany ara-dalàna ny marijuana amin'ny fanjakana.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS CANNABIS any New York
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS CANNABIS AO MEXICO Vaovao
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New York
by Tom | Jun 1, 2021 | Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New York
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa rongony any New York Tamin'ny faran'ny volana martsa 2021, dia neken'ny New York ara-dalàna ny fivarotana rongony ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 21 taona. Saingy, ny varotra dia tsy hampanan-kery raha tsy amin'ny farany- amin'ny taona ho avy, miaraka amin'ny vinavina manantena ny tsena hahatratra mihoatra ny 1.2 miliara dolara ...